Qorshe Hagaha Oo Si Habsami ah Uga Socda Magaalada Fiiq - Cakaara News
Qorshe Hagaha Oo Si Habsami ah Uga Socda Magaalada Fiiq
Fiiq(CN)Arbaco, 18ka Nov. 2015, Waxaa maalmahan si habsami leh uga socday Xarunta gobolka Nogob ee magaalada fiiq qorshe hagihii iskuxidhayay jidadka magaalada iyadoo hada kahor xaaqitaankii iyo calaamadayntii wadooyinka ladhameeyay.
Hadaba qorshe-hagahan oo aad muhiim ugu ah horumarinta magaalooyinka guud ahaan ayaa xafiiska horumarinta magaalooyinka dhismaha iyo warshadaha uu ka hirgaliyay magaalada fiiq iyadoo shacabka, maamulka gobolka iyo degmaduba ay si wayn usoo dhaweeyeen.
Gudoomiyaha degmada fiiq mudane Cabdiqaadir Maxamed Xasan ayaa sheegay in hirgalinta qorshe-haguhu uu aad muhiim ugu ahaa isu-furitaanka magaalada maadaama magaaladu markii hore qorshe-hage la’aan dagtay meelo badan oo jidad u baahnaana ay kala xidhnaayeen. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa sheegay in hirgalinta qorshe-haguhu yahay mid soo saari doona bilicda magaalada.
Ugudanbayna shacabka magaalada fiiq oo si wayn usoo dhaweeyay hirgalinta qorshe-hagaha ayaa sheegay in qorshe hage la’aantu ay caqabad ku ahayd dhismaha iyo fiditaanka magaaladaba balse maanta wixii kadanbeeya dhismaha,fiditaanka, maalgashiga iyo bilicda magaaladuba ay kordhi doonto. Waxayna shacabku iyagoo aad ugu faraxsan hirgalinta qorshe-hagaha kusoo dhaweeyeen gacmo furan iyagoo waliba kaqayb qaadanaya.
Hirgalinta qorshe-hagaha kasocda magaalada fiiq ayaa kamid ah dadaalada ay xukuumadu ugu jirto horumarinta dhanka magaalooyinka.